मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकामध्ये १३ हजार डाक्टर कहाँ छन् ? – Ramailo Sandesh
काठमाडौं । नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएकामध्ये करीब १३ हजार डाक्टर निस्कृय रहेको पाइएको छ । काउन्सिलका रजिष्टार डा. कृष्ण अधिकारीले दर्ता भएका करीब २९ हजारमध्ये १६ हजार डाक्टरमात्रै सक्रिय रहेको पाइएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले १६ हजार डाक्टरले मात्रै नेपाल टेलिकमले उपलव्ध गराएको एकमहिने निशुल्क भ्वाइस प्याक सुविधा लिएकाले काउन्सिलमा दर्ता रहेका बाँकी डाक्टर कता छन् भन्ने जिज्ञासा उब्जिएको बताउनुभयो ।
टेलिकमको सुविधा १६ हजार डाक्टरले मात्र लिनुले दर्तावाल अरु डाक्टर निस्कृय रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कोही विदेश जानु भयो होला, कोहीले आफ्नाे व्यवसाय छोड्नुभयो होला वा कतिको निधन भयो होला । त्यसैले हामीले सबै डाक्टरहरुको अध्यावधिक गर्न लागेका हौं ।’ उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस ब्रिफिङमा भन्नुभयो ।
एकीन तथ्यांकका आधारमा एकीकृत योजना बनाउन सहज हुने तथा सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिने भएकाले अहिले काउन्सिलले सफ्टवेयर निर्माण गरि सबै डाक्टरहरुको तथ्यांक राख्न लागेको उहाँको भनाइ छ । एकीन तथ्यांक नहुँदा कोरोना महामारीमा समस्या देखिएको अनुभव सुनाउदै उहाँले भन्नुभयो, ‘बिरामीको उपचारका लागि डाक्टरहरु माग गरियो तर काउन्सिलमा दर्ता भएका सबै सम्पर्कमा आउनुभएन ।’
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० को दफा १३ बमोजिम दर्ता किताब दुरुस्त राखी समय समयमा नाम दर्ता भएका डाक्टरहरुके नाम, ठेगाना र योग्यता खोली दर्ता किताबमा दर्ता गर्ने, दिवंगत भएका डाक्टरहरुको नाम हटाउन, कुनै दर्तावाल डाक्टरले आफ्नो व्यवसाय छाडेमा वा आफ्नो ठेगाना बदलेमा रजिष्ट्रारलाई एकमहिनाभित्र सूचना दिनपर्ने व्यवस्था छ ।
टाउको दुखेमा के गर्ने ? धेरै टाउको दुखयो भने अन्य खतर्नाक रोग पनि लेउछ त ? सतर्क हुनुहोस र थाहापाउनुहोस